ကွန်ပျူတာ အခြေခံအကြောင်း အပိုင်း (၁) - Min Oaker
ဗဟုတုတဆိုင်ရာ နည်းလမ်းလေးများ ကွန်ပျူတာ အခြေခံအကြောင်း အပိုင်း (၁)
ကွန်ပျူတာ အခြေခံအကြောင်း အပိုင်း (၁)
by Min Oaker on 3:55 AM in ဗဟုတုတဆိုင်ရာ နည်းလမ်းလေးများ
ဒီနေ့Computer အခြေခံအကြောင်းလေးတွေကို သိသလောက်လေးတင်ပြချင်ပါတယ်
ဒီတစ်ခါတော့ ကွန်ပျူတာမှာ အခြေခံသိသင့်တဲ့အချက်လေးက စပြီး သင်တန်းသဘောမျိုးလေး လွမ်း.. ပို့ ချသွားပါမယ်… ကွန်ပျူတာကို စတင်လေ့လာသူများအတွက် အထောက်အကူပြုမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်…
Keyboard – A keyboard isadevice that lets you type information and instructions intoacomputer. Keyboard ကတော့ ကွန်ပျူတာထဲကို အချက်အလက်များ၊ ညွှန်ကြားချက်တွေကို ထည့်ပေးနိုင်တဲ့ ကိရိယာပါပဲ…
Mouse – A mouse isahandheld device that lets you select and move items on the screen. Mouse ကတော့ မိမိရွေးချယ်လိုတဲ့အရာ၊ ရွှေ့ ပြောင်းလိုတဲ့အရာတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ လက်ကိုင်ကိရိယာလေးပါ…
Printer – A printer isadevice that producesapaper copy of documents you create on the computer. Printer ကတော့ ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေကို စာရွက်နဲ့ထုတ်နိုင်တဲ့ ကိရိယာပါ…
Modem – A modem isadevice that lets computers communicate through telephone lines. A modem can be found outside or inside the computer case. Modem ကတော့ ဖုံးလိုင်းမှတစ်ဆင့် ကွန်ပျူတာအချင်းချင်း ဆက်သွယ်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ ကိရိယာပါ… Modem ကို အပြင်ဖက် (သို့ မဟုတ်) ကွန်ပျူတာ Casing အတွင်းမှာ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်…
What is called Hardware and Software? Hardware and Software are the two basic parts ofacomputer system.
credit >> Thai IT လူငယ်များ
By Min Oaker at 3:55 AM